8-da Maarso: Maarso wuxuu ku dhammaadaa Madrid - Maarso adduunka
Home » Noticias » Qoraalada saxaafadda » 8-da Maarso: Maarso ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Madrid
8-da Maarso: Maarso ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Madrid
18 / 03 / 2020 15 / 03 / 2020 by Antonio Gancedo
MARRADA 8: BAADHII 2AAD EE BAARLAMAANKA EE NABADGELYADA EE NABADGELYADA IYO NOVIOLENCE-da waxay kuxirantahay waxkasta oo kujira MADRID
159 maalmood ka dib markii ay booqatay meeraha iyada oo hawlo laga qabtay 51 dal iyo 122 magaalo, oo laga booday dhibaatooyin iyo dhacdooyin badan, Kooxda Asalka ah 2ª World March Waxay ku soo gabagabeeysay socdaalkeedii Madrid 8-deedii Maarso, oo ah taariikhda loo xushay abaalmarin iyo muujinta taageerada loo hayo halganka haweenka. Imaatinkaasi waxaa lagu dabaaldegay dhacdooyin kala duwan intii u dhaxeysay Maarso 7 iyo 8.
Sabtida, Maarso 7: laga bilaabo Vallecas ilaa Retiro
Subaxnimadii Xarunta Dhaqanka del Pozo ee xaafada Vallecas, a riwaayad mataano ah u dhexeeya Iskuulka Núñez de Arenas, kooxda heesaha Pequeñas Huellas (Turin) iyo Manises Cultural Athenaeum (Valencia); boqol wiil iyo gabdhaba waxay sameeyeen qaybo muusig oo kaladuwan, iyo heeso rap ah.
Kahor goob fagaare ah oo ay bixiyeen qoysaskooda iyo asxaabtooda, iyo sawirada asalka ah ee calaamadaha aadanaha ee Nabadda iyo Rabshadda, Rafael de la Rubia wuxuu qaatay sagxadda isagoo xasuusanaya in sumaddii ugu horreysay ee aadamiga in si sax ah looga sameeyay dugsiga Núñez de Arenas iyo in mataanaha ayaa ka soo diyaar garoobay diyaargarowga bisha Maarso; Wuxuu faallo ka bixiyay in inta lagu gudajiray uu sidoo kale ka helay meelo badan oo wiilasha isticmaalaya rap oo ah qaab muuqaal muusiko ah si ay ula xiriiraan dhalinyarada. Ka dib, wuxuu ku dhiirigaliyay dadka waaweyn inay fiiro gaar ah siiyaan dhalinyaradaas oo muujinaya wadada iyaga oo leh qiyam cusub, sida daryeelka deegaanka iyo iskaashiga midba midka kale.
Galabnimadii xafladda xiritaanka "rasmiga ah" ee Maarso ayaa ka dhacday Hoolka golaha carbeed u dhow Retiro Park. Kaqaybgalayaashu waxay awoodeen inay ka tashadaan hoolka laga soo galo agab kala duwan oo lasiiyay kooxda salka ku haysa inta lagu gudajiray bisha Maarso, sida boorso-boorso ay ku jiraan sawirro muhaajiriin dhalinyaro ah oo ka imanaya Rome wadamo kala duwan oo Afrika ah, kana gudbaya badda Mediterranean.
Dhowr ereyo mahadnaq ah ka dib Casa Árabe, Martina S. way soo dhoweysay kuwa jooga, qaar ka yimid India (Deepak V.), Kolombiya (Cecilia U.), Chile (Lílian A.), France (Chaya M iyo Denis M.) Talyaani (Alessandro C., Diego M. iyo Monica B.), Jarmalka (Sandro C.), sidoo kale waxaa ku jira saaxiibo isku dhow oo aan jir ahaan u imaan karin fiisooyin ama arrimo caafimaad ayaa raacay fadhiga iyadoo la raacayo . Rafael de la Rubia wuxuu marka hore eegay dib-u-eegida sida II-yadaan 2-aad u soo ifbaxday iyo cilladdeeda iyadoo laxiriira tii hore wuxuuna dib u xasuustay mowqifkiisii ​​hal-ku-dhigga ahaa.
Intaa ka dib wakiilo ka socda shanta qaaradood ayaa ka warbixiyay dhacdooyinka ugu muhimsanaa ee dhacay intii lagu guda jiray iyo hareeraha socodka. Wax walba waxaa lagu dhammeystirey faallooyinka, qaawan, sawirada muuqaalka iyo gelinta farriimaha fiidiyowga ee dalal kala duwan, taasoo dhalisay in howlo fara badan ay ka socdaan dhaqdhaqaaqayaasha iyo kooxo aan tiro lahayn iyo hay'ado.
Ugu dambeyntiina, qaar ka mid ah ficilada iyo mashaariicda ayaa la sheegay, kuwaas oo heerar kala duwan oo sax ah leh, ay ka soo baxeen safarka:
Mataanaha u dhexeeya xarumaha waxbarashada. Kulliyadaha iyo Jaamacadaha.
Nuqullada buugaagta Maarso: a) Buug sawir ka mid ah oo lagu daabacay guriga Saure oo leh buugaag taxane ah oo MM; b) Buugga 2aad ee MM, oo soo ururinaya wixii la qabtay iyo c) Ciyaartii Goose ee MM
Ku dhawaaqida danaha degmadu leedahay ama xiisaha dhaqanka u leh MM ee heerarka degmo iyo gobol.
Ololaha "Badda Dhexe, Badda Nabadda" ku dhawaaqista magaalooyinka sida Safaaradaha nabada. Tallaabada xigta ee Badda Adriatic.
Senegal (Thiès): Madasha "Afrika xagga xag-jirnimada"
Bisha Maarso Ameerika Laatiin RabshadahaSanadkii 2021 San José, Costa Rica, halkaas oo laba dariiq ay ka soo bixi doonaan waqooyiga iyo koonfurta qaaradda.
Shirka "Haweenka soo galaya ” gudaha Argentina (Tucumán)
Ololaha Aynu dhaqaajinno Nabadda "Nepal / India / Pakistan
Wax ka qabashada shirwaynihii abaalmarinta Nabadda ee NobelShirkii Qiimaha Nabada ee Nobel)Koonfurta Kuuriya (Seoul).
Ka-qaybgalka shirka hubka-ka-qaadista Nukliyeerka Xafiiska Caalamiga ah ee Nabada iyo suurta galnimada in lala kulmo Guterres, Xoghayaha Guud ee UN ee USA. (New-York)
Soo jeedinta xaflada si loogu dabaaldego ansixinta TPAN ee Japan (Hiroshima).
Goobjoogayaasha rabshadaha Curitiba iyo guddiyada joogtada ah ee Rabshadaha ... ee Brazil.
Dhacdada ayaa ku xirneyd iyada oo aan loo eegin xaalada deegaanka, iyada oo lagu casuumay qof walba in uu dareemo oo uu ku sumoobo fayraska shaqaaqada.
Axadda Maarso 8: Puerta del Sol, Km.0 iyo sumadda aadanaha
Laga soo bilaabo 11: 00 a.m. ballet qalaad ayaa dhacay ee Puerta del Sol ee Km.0 hortiisa soo jiidashada dareenka dadka jidka maraya. Kooxda u ololeysa Madrid oo leh saaxiibo aad u tiro badan, oo maalin ka hor ka yimid magaalada Brussels iyo Tangier, ayaa dejinayay astaamaha iyo furfurnaanta astaan-xumida halka astaamaha rabshadaha lagu muujinayo dhulka. Goobo ayaa la abuuray kaas oo dadka cajiibka ahi bilaabeen inay wareegaan. Maryan, ka "Haweenka nabadda socdaWuxuu u jihaystay laxanka durdurka macnaha xafladaas maalintaas wuxuuna sagxadda u siiyay Rafael de la Rubia: "… 159 maalmood kadib waxaan halkaan ugu xiraynaa Marxaladda Labaad ee Adduunka Nabadda iyo Rabshadda.
Waqtigan xaadirka ah MM wuxuu hawlo ka fuliyay 50 dal iyo in kabadan 200 oo magaalo wuxuuna lahaa koox saldhig, oo ay jiraan dhowr goob joogayaal ah, oo meeraha lagu wareejiyay ... Socdaalkan waxaa dhiirrigeliyay waalidiinta cunsuriyadda yaa naga horreeyay, oo aan ku sharfay jidka: M. Gandhi oo jooga Sevgram Ashram (India) iyo Silo oo ku yaal Punta de Vacas Park (Argentina), iyo kuwo kale… ”. Ka dib markii uu u mahadceliyay kaqeybgalayaasha, wuxuu ku martiqaaday qof walba inuu ku soo biiro mashruuca ¡¡¡3-da Maarso !!! 5 sano laga bilaabo hadda, sanadkii 2024.
Encarna S. waxaa qoray the Ururka Haweenka Xuquuqda Aadanaha ee Rabshadda, waxay qiraysaa doorka haweenka doorka adduun weynaha. “Haatan waa xilligii dumarku kacayaan, milkiilayaasha asaaskeena oo ay u go'antahay nolosha. Waxaan cadeyneynaa in nolosha halis ku jirto, in bina aadamka la hanjabayo, waxaana ka go'an tahay ilaalintiisa. Laga bilaabo maanta waxaan ku casuumaynaa ka go'naanta ilaalinta nolosha, dhisidda xiriirrada, abuurista shabakado: shabakadaha midnimada, daryeelka, shabakadaha aadanaha ee dheddigga. Si aan ugu laaban karno dareenka noocyada, rikoorka ah in dadka oo dhami ay yihiin hal ”
Ka dib markii la sameeyay jaangooyo hore loo qorsheeyay, laba kooxood ayaa isku xigxiga ka dhigay laba ulood oo waxay ku dhaqaaqeen khadadka dhulka ilaa laga hagaajinayo astaamaha Rabshadaha. Calaamadda lagu oggol yahay, sanduuqyada cad iyo kuwa guduudan ayaa kor loo qaaday, taasoo muujineysa sida, laga bilaabo xarunta guduudka ah, haweenku waxay ku faafiyaan cadaawad la'aan. Sawirrada kore waxaa laga duubay si ay u xusuustaan ​​dhacdada. Ka tegista goobada kadib, kaqeybgalayaashu waxay farxada la wadaageen dadka intiisa kale.
Markii dambe, bishii maarso si rasmi ah ayaa loo xiray ka dib 148 kun oo km. ku wareegsan meeraha isla Km.0 isla meeshii uu ka tegey 159 maalmood ka hor.
Galabtii u dhaqdhaqaaqayaasha 2-aad ee MM ayaa kaqaybqaatay isu duwaha dumarka 8M oo ay si wada jir ah u soo bandhigeen.
Waxay ahaayeen laba maalmood oo buuxa oo qosol dheer oo ka dhexeeya dadka ka kala yimid dalal kala duwan iyo dhaqamo, diyaar u ah inay sii wadaan iskaashiga mustaqbalka. Caddeynta tani waa in maalintii ku xigtay ay horeyba u dhacday shirar aan rasmi ahayn oo lagu soo bandhigayo mashaariicda Bisha Maarso Ameerika Laatiin Rabshadaha iyo ololaha Badda Nabadda ee Badda Mediterranean ...
Qoraalka: Martine SICARD oo Dunida kajira Dagaal la'aan iyo Dagaal la'aan
Sawirro: Pepi iyo Juan-Carlos iyo, Deepak, Saida, Vanessa, ...
0 / 5	(0 Review)
NABAD WUXUU KUU SAMEEYEY DHAMMAAN